द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाको राजनीतिक तरंग सर्वोच्चको फैसलासँगै अदालतमा मुद्दा बाँकी भएको भन्ने सरकार तथा कतिपय राजनीतिक पार्टीको तर्कको बाहना सकिएको छ। अब एकमात्र काम भनेको अदालतको २०७० फागुन १४ गते भएको फैसला अनुसार संशोधन गर्ने र द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार हननका घटनामा संलग्नहरुको फाइल खोलेर अनुसन्धान सुरु गर्ने हो। मंगलबार, वैशाख १६, २०७७
द्वन्द्वोत्तर न्यायको सकस-५ : संक्रमणकालीन न्यायमा साना दलको सरोकार कति? तत्कालीन ती पार्टीहरुमध्ये एकीरणपछि कुनै नयाँ दल बनेका छन्, कुनै चुनावको ‘थ्रेसहोल्ड’ पार गर्न नसक्दा राष्ट्रिय दलको मान्यताबाट मुक्... बुधबार, असार १८, २०७६
द्वन्द्वोत्तर न्यायको सकस-४ : संक्रमणकालीन न्यायमा घुसेको भू-राजनीति तत्कालीन १२ वर्षको सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेका र अहिलेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले भ... शुक्रबार, असार ६, २०७६
द्वन्द्वोत्तर न्यायको सकस-२ : संक्रमणकालीन न्यायमा यस्तो छ राजनीतिक मुड १२ वर्षे सशस्त्र युद्ध सकिएर शान्ति प्रक्रियाले १२ वर्ष पार गरिसक्दा पनि द्वन्द्वोत्तर न्यायको विषय ‘कुइरोको काग’ जस्तै बनेपछि सरोका... आइतबार, जेठ २६, २०७६
संक्रमणकालीन न्याय : आफैं सल्टाउने कि विदेशीलाई ठाउँ दिने? संक्रमणकालीन न्याय भनेको कानुनी शासनको कुरा हो। यो विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो विदेशी लगानीसँग जोडिएको छ।... बिहीबार, माघ १७, २०७५